Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. टुटल र पठाओ सेवामाथि किन बारम्बार प्रश्न ? – Emountain TV
काठमाडौं, ७ मंसिर । राजधानी काठमाडौंमा आकर्षण बटुलिरहेको टुटल तथा पठाओ सेवामाथि फेरी प्रश्न उठेको छ । एपमार्फत यात्रु सम्पर्क गरी मोटरसाइकलबाट यात्रु ओसारपसार सेवा दिईरहेको ती दुबै सेवा बन्दा गर्न यातायात व्यवस्था विभागले सुचना जारी गरेपछि अहिले यसको पक्ष विपक्षमा बहस सुरु भएको छ ।
शरिरीक रुपमा फरक क्षमताका भरत बिसी यात्रुलाई पठाओ सेवा दिनुहुन्छ । स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत उहाले यसैबाट नै सबै खर्च जुटाउनुहुन्छ । यो सेवा रोक्न सरकारी निकायले सूचना जारी गरेपछि बिसीलाई अहिले दुःखी बनाएको छ ।
बीसीको दुबै खुटृाले काम गर्दैन । अध्ययन गरेको प्रमाणपत्र छ । तर कमाई गर्ने अर्काे माध्यम नभएपछि बिसीले पठाओ सेवा शुरु गर्नु भयो । तीन पांग्रे मार्फत सेवा दिंदै आएका बिसीको दैनिक १५ सय आम्दानी हुने गथ्र्यो । यदि यो सेवा बन्द भएमा कसरी कमाई गर्ने भन्ने चिन्ताले बिसीलाई अहिले सताइरहेको छ ।
बीसी त एक जना प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो । व्यावसायीहरुका अनुसार अहिले नेपालमा झण्डै ५० हजार जति व्यक्तिहरु टुटल पठाओ जस्ता सेवा प्रदायकसँग आबद्धछन् जसमा ४० भन्दा बढी भरत बिसी जस्तै फरक क्षमताका व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ । यसरी हेर्दा यी सेवा कम्पनिको माध्यममले ५० हजारले रोजगारी पाएका छन् । सरकार भने यति ठूलो स्वरोजगार सञ्जाललाई बन्द गर्न लागिरहेको छ । सरकारको निर्णयले मर्माहत बनाएको अर्का संचालक आयुष केसी बताउँछन् ।
टुटल र पठाओ सेवाप्रति सर्वसाधारण पनि आकर्षित देखिन्छन । यात्रामा यसले धेरै सहज बनाएको उनीहरु बताउँछन । कलेज जाने तथा कार्यालय जानेहरुले पनि यो सेवा लिइरहेको पाइन्छ ।
यसरी सेवाग्राही र सेवा प्रदायक काम गरिरहेको बेला यातायात व्यवस्था विभागले २०४९ सालको ऐनलाई आधार बनाई सेवा बन्द गर्न भनेको छ । सरकारले कानुनको अपराधमुखी व्याख्या नगरी कानुनी बाटो सहज बनाउनु पर्ने बताउनुहुन्छ संवैधानिक कानुनका जानकार डा. विपिन अधिकारी ।
टुटल र पठाओ कर कार्यालयमा कानुन अनुसार दर्ता भएर संचालनमा रहेका छन् । तर यातायात विभागले अवैध करार गर्नुले स्पष्ट नीतिको अभाव रहेको देखाउँछ । विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८ (२) मा “निजी सवारी यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन“ भन्ने व्यवस्थालाई आधार बनाएको छ ।
ऐनको दफा १२ मा “कुनै एक प्रयोजनका लागि दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनका निम्ति प्रयोग गर्न पाइने छैन“ भन्ने उल्लेख छ । त्यसैलाई टेकेर यातायात व्यवस्था विभागले टुटल र पठाओ सेवा बन्द गर्न सूचना जारी गरेको छ ।
शनिबार, ०७ मङि्सर २०७६